Xog: Dowladda Somalia Oo Laga Caawinayo Baarista Qarixii Zoppe. – Hornafrik Media Network
Ra’iisul Waarihii dalka Qatar oo is casilay iyo mid kale oo durba la magacaabay
Xog: Dowladda Somalia Oo Laga Caawinayo Baarista Qarixii Zoppe.
By HornAfrik	 On Oct 16, 2017
Khuburo Caalamiya ayaa ka caawinaysa Somalia Qarixii dhawaan ka dhacay Zoppe, kadib markii ay sidaas codsatay Dowladdu.
HornAfrik waxay ogaatay inay soo gaareen Muqdisho Khuburo ka socda Dalalka Maraykanka, Ingiriiska, iyo Faransiiska, kuwaas oo ka caawinaya Dowladda Somalia baarista Qarixii waynaa ee ka dhacay Zoppe, Waxaa sidoo kale la keenay Muqdisho qalab dheeriya oo ka caawinaya Khuburadan baarista ay ku jiraan. iyagoo sidoo kale Raadadka Qaraxii ka haray loo qaaday Dalal dibadda ah.
Baarista ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ah in la ogaado Qofka waday Gaarigaasi ee is qarxiyay, Iyadoo la baarayo DNA-giisa, Waxaana socda illaa iyo hadda Baaritaanadda arrintan. Waxay sidoo kale Khuburadan Su’aalo waydiinayaan Saraakiil Amni oo ka tirsan Dowladda Somalia, kuwaasoo masuul ka ahaa Ammaanka Jidadkii uu soo maray Gaarigaan.
Dowladda Somalia ayaa laga diiday inay Khuburadan ku darsato Saraakiil la shaqaysa, si ay door ugu yeelato Baarista, Waxayna Khuburada codsadeen in si Madaxbanaan fursad loogu siiyo howlahooda Baarista, isla markaana ay soo gudbin doonaan Natiijadda Macluumaadka ay aruuriyaan. Waxayna ka cabsi qabaan in haddii Baarista ay Saraakiil Soomaali ah qayb ka noqdaan in Macluumaadkoodu si fudud banaanka ugu baxo, taasoo muujinaysa in Hay’adaha Ammaanka Somalia aysan ahayn wali kuwo awood u leh inay xafidaan Xogaha noocan oo kale ah.
Isku Dubiradka Howlaha Baarista iyo fududaynta waxyaabaha lagama maarmaanka ah ayaa loo xilsaaray Shirkad Amni oo la yiraahdo Bankroof, taasoo Khuburadda caawinaysa. Waxaana sidoo kale Amniga Khuburadan meelaha ay tagayaan u xil saaran Ciidamadda AMISOM, iyo Ciidamo gaar u tababaran oo Maraykan ah.
Qaraxa Zoppe ayaa ah kii ugu khasaaraha badnaa ee Taariikhda ka dhaca Magaaladda Muqdisho, Waxaana ku dhintay in ka badan 300 qof, iyadoo walina ay jiraan dad maqan oo la baadi goobayo.
Meydad hor leh oo Maanta laga soo saaray Dhismeyaashii ku Bur-buray Qaraxii Zoobe
XIRIIRKA WALAALNIMO EE TURKIGU WAA MID SOO JIREEN AH.